Apple ekweta, sị iPhone 6S na 6S Plus Battery Mita-eduhie eduhie - News Ọchịchị
Apple ekweta, sị iPhone 6S na 6S Plus Battery Mita-eduhie eduhie
Company na-ekweta, elekere ahụhụ na nke na-akpata mita na-egosipụta na-ezighị ezi pasent ụgwọ mgbe ụbọchị na oge ntọala gbanwere
Isiokwu a na-akpọ “Apple na-ekweta iPhone 6S na 6S Plus batrị mita eduhie” e dere site Samuel Gibbs, n'ihi na theguardian.com on Monday 18 January 2016 10.18 UTC
Apple ka kwetara ka a ahụhụ na ya smartphone batrị mita na ike na-ahụ iPhone 6S ma ọ bụ iPhone 6S Plus-egosipụta a elu ụgwọ karịa ekwentị n'ezie nwere.
The njehie pụtara na batrị mita ada ada imelite pasent egosipụta, na-eduga na ụfọdụ iPhones mechisịrị ọnụ ala mgbe ọ ka na-egosipụta zuru ụgwọ.
Dị ka Apple, ahụhụ ahụ na-egosi mgbe ndị ọrụ na aka ịgbanwe oge ha iPhones ma ọ bụ ibugharịa n'etiti oge zones, ihe a onye ọrụ nwere ike ime ma ọ bụrụ na-agbanwe elekere nke ìhè ego ma ọ bụ mgbe na-eme njem.
The ụlọ ọrụ kwuru na ọ na-arụ ọrụ on a fix, ma na ka ọ dịgodị ọrụ kwesịrị mbụ Malitegharịa ekwentị ha iPhones, mgbe ahụ enyere ndị akpaka oge mwube n'ime "Ụbọchị & Time "ntọala.
The iPhone-onye nwere a akụkọ ihe mere eme nke chinchi jikọrọ ya na oge na ụbọchị ntọala. Ruo ọtụtụ afọ a ahụhụ na smartphone akpaka ìhè ego ukpụhọde mebiri Mkpu, -ahapụ ụfọdụ ndị ọrụ afọ maka ọrụ. Ìhè ego bụkwa na-akpata ihe a adịghị ichegbu ahụhụ na 2013, mgbe a ahụhụ na iPhone ederede njikwa hụrụ afọ gara aga bu n'uche na onye ọ bụla nwere ike ime n'otu ntabi ugboelu smartphone na SMS ozi.
Apple a ugbu a na-anwale a ọhụrụ version nke ya iOS software nke nwere ike idozi nke. The iOS 9.3 update, wepụtara na ọha beta testers na-, ga idozi chinchi na gbakwunye ole na ole ọhụrụ atụmatụ gụnyere a n'abalị mode na nzacha si acha anụnụ anụnụ ìhè na-enyere ndị ọrụ na-ehi ụra na ikike ụzọ multiple Apple ese na otu iPhone.
Tim Cook ọnọ Apple iPhone Smart Battery Ileba, -ekwu na ọ bụghị a 'mkpumkpu azụ'
← Microsoft na-ekwu, ọhụrụ processors ga na-arụ ọrụ na Windows 10 [verge] Ihe menyeujo ị, Ma dị oké ọnụ ahịa Ọ [RANKER] →